NextMping | Dzidziso Yeutungamiri
Kudzidziswa kwehutungamiriri NeNe NextMapping ™
Iyo ramangwana rebasa rinoda hutsva hunyanzvi hwevatungamiriri uye zvikwata.
Makambani akadai seAmazon arikuisa mari mabhiriyoni mukuvandudza uye kutengesa zvekare vashandi. Iyo onus yekugara mune ramangwana yakagadzirira iri pane vese vashandirwi nevashandi uye izvi zvinosanganisira kutarisa kwehupenyu hwese kudzidza.
Kuita shanduko uye ine simba vatungamiriri shanduko uye nhengo dzechikwata dzinofanirwa kuchinja hunhu. Nzira yakanaka yekuchinja maitiro ndeye kuburikidza nekudzokorora kwekudzidza pamwe nenguva chaiyo yekushandisa yezvakadzidzwa.
Yedu Ye NextMping ™ yehutungamiriri kudzidziswa inowanikwa chero ne Zoom, online makosi anotarisana neramangwana rebasa pamwe nezvidzoro zvakagadziriswa izvo zvinogona kuendeswa kuburikidza neWebinar kana chena zvakanyorwa kuti zviwanikwe mukati.
2030 ingaratidzika sei ...
… Kana iwe wakakwidziridza mari yako mukusimudzira hunyanzvi hwezvikwata zvako?
Iwe nevatungamiriri vako munotungamira nezveramangwana mupfungwa?
Munguva yekukurumidza yekusangana yepanzvimbo yebasa yemazuva ano mukana wepamusoro wekukwikwidzana uri kuva iyo kambani nevazhinji vakagadziridzwa vatungamiriri uye zvikwata.
Ndeipi chirongwa chako chekuona kuti vanhu vako vane vazvino uye zvakanyanya kusvika parizvino kudzidziswa nekuvandudzwa kwehunyanzvi kuti vasangane neshanduko inoenderera neyamabasa eindasitiri yako?
Tsvagiridzo inoratidza kuti Millenials neGen Z zvichagara kwenguva yakareba kumakambani anopa mikana yekudzidza uye yekuvandudza mikana kuburikidza nekudzidziswa.
Tsvagurudzo inoratidzawo kuti mabasa echinyakare nemabasa zvichave chinhu chekare uye kuti nzvimbo dzebasa repamberi dzichange riine nguva yakazara, chikamu chenguva uye vashandi vevashandi vevashoma.
Unyanzvi hunodiwa ...
Unyanzvi hunodiwa kuti utarise ramangwana rinochinja rinononoka rinosanganisira:
Iko kugona kubata huwandu hwakawanda hweruzivo uye kuziva nzira yakanakisa yekuita
Iko kugona kutungamira shanduko nehushingi, kutungamira, kusimbisa uye kuona
Iko kugona kwekunzwisisa dzakawanda mamiriro uye nekutaura kune akasiyana siyana evatambi
Iko kugona kwekubatana pamwe nekugadzira nevanhu vakasiyana siyana vane hunhu hwakasiyana
Iko kugona kuwedzera tekinoroji nekutarisa kwekutanga kune 'vanhu kutanga'
Iko kugona kwekuwedzera kwakakosha ramangwana rehunyanzvi hwebasa re 'hunyanzvi hwekudyidzana kwevanhu'
76% yeECO's inotaura ramangwana rakagadzirira hunyanzvi kusimudzira kwevatungamiriri uye zvikwata senzvimbo huru yekutarisisa apo tinonanga ku2030.
70% yemasangano anokona kushomeka maguru seimwe yematambudziko avo mashanu epamusoro.
Chete 49% yevashandi vanoti makambani avo anopa hunyanzvi hwekudzidziswa uye mikana yekukura.
Maitiro matsva ekuvandudza kwehunyanzvi
Dzidziso dzechinyakare nzira dzekare hadzisi kuzogadzirira vatungamiriri uye zvikwata zveramangwana.
Maitiro matsva ekuvandudza hunyanzvi anodikanwa - iyo nzira nyowani inosanganisira kharikhulamu iyo yakabatana neicho chaicho mamiriro ezvinhu pabasa. PaNextMapping TM vanachipangamazano vedu vanozivikanwa muzvirongwa zvekudzidzisa zvinoenderana neyedu NextMapping ™ maitiro.
Kuti tigadzire 'rutanda' maitiro edu ehupfumi anovimbisa 90% ++ yekuchengetedza mwero, 70% chiyero chekunyorera pabasa rekudzidzisa uye nekuvandudzwa kwenguva yakareba kuyerwa mukuita kwebasa.
Mhedzisiro yekupedzisa kudzidzisa zvirongwa inosanganisira:
Kuwedzera bhizinesi kukura sevatungamiriri uye zvikwata hunyanzvi huwandu hunowedzera
Kuwedzera hunyanzvi uye kuwirirana pakati pevatungamiriri uye mukati memapoka
Kuwedzerwa kugadzira vatengi mhinduro nekuda kwevakakwirira vane hunyanzvi uye vakapihwa simba nhengo dzeboka
Kuwedzera kukurudzira uye kubatanidzwa kwevashandi vese
Kuwedzera kugona kubata uye kuchengetedza yakakwirira kuita tarenda
Kuwedzera hutungamiri uye kubatana kwechikwata mukugadzira ramangwana rakatarisana nekuona uye chinangwa
Isu tinopa hutungamiri uye zvirongwa zvekudzidzisa kwechikwata kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana dzekusvitsa dzinosanganisira mumunhu, chaicho kuburikidza neZoom kana WebEX, online vhidhiyo kudzidziswa uye kukwikwidza.
Vese vakapedza kudzidza zvirongwa zvedu vanogashira NextMping ™ satifiketi yekupedzisa.